Iqela lokuhlela | Ukutya kukaNutri
Ukutya kukaNutri yiwebhusayithi yeSpanish ejolise ekuphuculeni ukutya, impilo kunye nokuba sempilweni kubo bonke abasebenzisi bayo. Yayisekelwa kwi-2007, ke oko kwakha igama eligcinwayo ngenxa yombulelo wethu Iqela lokubhala ukuba, ukwabelana ngamaxabiso afanayo kunye nemigaqo, ukuvelisa umxholo osemgangathweni rhoqo ngeveki.
Ukuba unomdla kuyo Joyina iqela lethu lababhali ngamava, unako gcwalisa le fomu ilandelayo y sizakunxibelelana nawe ngokukhawuleza.
Ukuba ufuna ukubona zonke izihloko esizigubungeleyo kule minyaka kwaye qalisa ukuphucula impilo yakho ngoku, ungajonga ifayile ye iphepha lamacandelo.
Unyango lwendalo kunye nomthandi wokutya okunempilo, ndiyakuthanda ukunceda abantu baphile ubomi obunempilo. Ngokudibanisa ukutya okufanelekileyo kunye nokuzilolonga umzimba, kunokwenzeka ukuba wenze ngokusemandleni akho yonke imihla, kwaye ngaphezu kwako konke, wonwabe ngakumbi.
Ndiyakuthanda ukujonga isondlo, impilo kunye neepropathi zokutya hayi isisombululo kwingxaki kodwa indlela yokuphila yam. Ekhaya saboniswa indlela yokutya okumnandi ukusuka ebuncinci kakhulu, apho umgangatho wawongwa ngaphezulu kwayo yonke enye into. Kungoko umdla wam omkhulu kwi-gastronomy kunye neempawu ezilungileyo zokutya zavela. Kude kube namhla ndihlala ezilalini, ndonwabela ukuphefumla komoya opholileyo ngelixa ndikuvuyela ukukuxelela yonke into ofuna ukuyazi malunga nokutya, ukutya okumnandi kunye namayeza endalo.
Ndizalelwe eMalaga ngo-1965, kwaye ndilithanda kakhulu ilizwe lesondlo, kunye nempilo yendalo. Ukutya kubalulekile ukuze ukwazi ukuphila ubomi obusempilweni, yiyo loo nto ndikuthanda ukuhlala ndisexesheni ngokutya nakwizidlo, njengoko ndinokunika iingcebiso ezingcono.